Gaas oo awaamiir siiyay Hey’addaha Qaramada Midoobey ee fadhigooda yahay Garowe – STAR FM SOMALIA
Gaas oo awaamiir siiyay Hey’addaha Qaramada Midoobey ee fadhigooda yahay Garowe
Madaxweynaha Puntland Dr. C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa xarunta Madaxtooyada Garowe kula kulmay Mas’uuliyiinta Xafiisyada Hey’addaha Qaramada Midoobey ee fadhigoodu yahay Garowe, iyadoo kulankan looga hadlay arrimaha bani’aadanimada iyo mashaariicda horumarineed.
Kulankan ayaa looga hadlay waxyaabihii ka qabsoomay howlaha mashaariic ee ay Hey’addaha Qaramada Midoobey ka fuliyeen Puntland iyo kuwa wali qabyada ah sababaha ay u qabsoomi waayeen, iyadoo Madaxweynaha Puntland uu awaamiir adag siiyay hey’adaha.
Madaxweynaha Puntland ayaa u sheegay Wakiilada Qaramada Midoobey ee Xafiiska Garowe inay doonayaan in si dhow ula socdaan dhaqaalaha lagu soo qaado magaca Puntland, isla markaana la mariyo meelihii loogu tala galay, si ay bulshada u helaan adeegyo wax tar u ah.
Sidoo kale Madaxweynaha Puntland ayaa ku wargeliyay Hey’adaha Qaramada Midoobey inay u soo gudbiyaan shaqaalaha ka shaqeeya dhammaan xafiisyada hey’addahaas oo aanay ku jirin shaqaalaha ajnabiga, si ay u bixiyaan canshuuraha ku waajibay.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Puntland ayaa u sheegay howlaha Hey’adaha Qaramada Midoobey ka hayaan deegaanada Puntland loo baahan yahay in la gaarsiiyo deegaanada fog ee miyiga.
Axmed Madoobe iyo Taliyaha Booliska oo kormeeray Saldhiga Isgaarsiinta ciidanka Booliska Kismaayo (Daawo Sawirrada)